किन हेर्ने ठमेल डट कम ? (सात कारण) « Mazzako Online
किन हेर्ने ठमेल डट कम ? (सात कारण)
मज्जाको अनलाईन, असोज २४ गते, आईतबार, २०७२, काठमाण्डौं ।
दशैमा प्रदर्शन हुने चलचित्र ठमेल डटकम यतिबेलाको प्रतिक्षित चलचित्र हो । ठमेल डटकम यतिबेला धेरैका लागि प्रतिक्षित चलचित्र बनेको छ । किन ठमेल डट कम हेर्ने त ? खासमा के छ यसमा ? आउनुस् हेरौ यसका केही कारणहरु –
१. नेपालको अग्रणी अनि प्रतिष्ठित चलचित्र निर्माण कम्पनी गोपीकृष्ण मुभिजले यसको निर्माण गरेको हो । गोपीकृष्णले यसअघिका चलचित्रबाट दर्शकको मन जित्नु र समय सापेक्ष रुपमा चलचित्र निर्माण गर्नु नै ठमेल डटकमको सकारात्मक पाटो हो ।
२. दोस्रो कारण हो पुराना तथा अनुभवि निर्देशक राजकुमार शर्माको निर्देशन रहनु । राजकुमार शर्मा सफल निर्देशक हुन । उनले थुप्रै सफल नेपाली र केही हिन्दी चलचित्रको समेत निर्देशन गरेका छन् ।
३.यस्तै अर्को कारण हो यसका कलाकारहरु । युवा पुस्ता माझ लोकप्रिय कलाकारहरु अनुप विक्रम शाही, नरेन खड्का, प्रमोद अग्रहरी र निता पोखरेल यसका मुख्य पात्र हुन । पुराना पुस्ताका सफल निर्देश र युवा पुस्ताका सफल कलाकारहरुको संयोजले चलचित्र हरेक वर्गका दर्शकले हेर्ने वातावरण पनि बनेको देखिन्छ ।
४. चौथो कारण हो यसका गीत संगीत । दयाराम पाण्डेका शव्द तथा अर्जुन पोखरेल र बसन्त सापकोटाको संगीत चलचित्रको अर्को शशक्त पक्ष हो । निर्माण पक्षले अहिले सम्म चलचित्रका दुई गीत सार्वजनिक गरेको छ । र ति दुवै गीत चर्चित भइसकेका छन् । गीतसंगीतका कारण पनि चलचित्रको प्रतिक्षा बढेको छ ।
५. अर्को कारण हो, स्कृप्ट । ठमेल डटकमलाई काल्पनिक स्थानको रुपमा चित्रण गर्दै चलचित्रले नारी कथा पेश गर्नेछ । थुप्रै सफल चलचित्र लेखिसकेका बज्रेश खनाल यसका लेखक हुन ।
६. यस्तै छैटौं कारणका रुपमा चलचित्रको एक्सनलाई लिइन्छ । द्वन्द्व निर्देशनमा अत्यन्त सफल निर्देशक एनबि मर्जनले ठमेल डटकमको एक्सन पक्ष समालेका छन् । आफुले चलचित्रमा नितान्त नौलो द्वन्द्व पस्केको उनको भनाई छ । सार्वजनिक प्रोमोमा समावेश द्वन्द्वका दृष्यलाई समेत दर्शकहरुले औधी रुचाएका छन् । भने पछिल्लो समय एक्सन चलचित्र हेर्न दर्शकहरु हलमा ओइरिएको देखिन्छ । जसका कारण पनि ठमेल डटकम सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
७. ठमेल डटकम चल्ने अर्को आधार हो यसको प्रदर्शन मिति । दशैको दिनबाट मोफसलमा र त्यसको भोलिपल्टबाट उपत्यकामा चलचित्र प्रदर्शन हुदैछ । सपरिवार दशैको छुट्टी सँगै मनोरञ्जनका लागि चलचित्र हेर्न हलसम्म जाने सक्नेछन् । चलचित्र ग्याङस्टर जनराको भएपनि नारी प्रधान कथामा आधारित छ । नारी कथा माथी बनेका धेरै चलचित्रले उनीहरुलाई अवलाका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको भए पनि यसमा नारी बिद्रोह देखिने बताइएको छ ।